Mucaaradka oo u dhow Bangui - BBC Somali - Warar
Mucaaradka oo u dhow Bangui
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 23 Maarso, 2013, 20:56 GMT 23:56 SGA
Madaxweynaha Jamhuuriyada Afrikada Dhexe Francois Bozize.
Mucaaradka Jamhuuriyada Afrikada Dhexe, ayaa lagu soo waramayaa inay kula dagaalamayaan ciidamada dowladda banaanka magaalo madaxda Bangui, maalmo kadib markii ay bilaabeen inay la dagaalamaan madaxweyne Francois Bozize.
Afhayeenka mucaaradka Seleka ayaa sheegay inay muucaardka ay u socdaan guriga madaxtooyada.
Korontada ayaa la gooyay ka dib markii mucaaradka ay la wareegeen magaalada Boali.
Sarkaal ka tirsan Qaramada Midoobay oo jooga magaalo madaxda, ayaa sheegay in dadka uu ku dhacay argagax, laakiin ma sheegin in mucaaradka uu magaalada soo galay ilaa hadda.